Degmadda Mariestad oo dacwad ka dhan ah dhalaanka keli socdka ah ku soo oogeeysa | Somaliska
Degmadda Mariestad oo dacwad ka dhan ah dhalaanka keli socdka ah ku soo oogeeysa
Degmadda Mariestad ee dalkaan Iswiidhan, ayaa sheegtay ineey dacwad ku soo oogeeyso dhamaan dhalaanka keli socodka ah ee da’doodu laanta socdaalka kor dhiyey. Go’aankan oo ay dar dar geliyeen maamulka degmadda ayaa dood iyo dhaleeceeyn dhalisay, sida uu qorayo wargeyska Mariestads-Tidningen ee ka soo baxa magaaladaasi.
“Tani waa mid ka hadleysa sida sinaanta leh aannu ula dhaqmeeyno dhamaan dadka oo idil, waxaan si toos ah dacwad ugu furi foonaa shaqsiyaadka sida beenta ah iska qaadanayey gunada (ceyrta) laga bixiyo xafiiska shaqada ama ceymiska” ayuu yiri Johan Abrahamsson oo ah madaxda degmadda Mariestad oo u waramayey wargeyska.
Dhinaca kale xisbiyada mucaaradka ee degmadda ayaa iyagana ka guuxay go’aankaasi, waxaana ay sheegeen in dhalaanka keli socodka ay aaneey ogeeynda’dooda saxda. Go’aaankan ayaa u muuqda mid aan si toos ah u quseeyn doonin sideed ruux oo dhalaanka keli socodka ah oo bishii janaayo ee sanadkii hore laanta socdaalka da’doodu kor dhiyeen.
Somaliska.com/Wakaaladda warrka TT